के भयो राजु मास्टर र बल्छिबिच ? – Gazabkonews
के भयो राजु मास्टर र बल्छिबिच ?
लामो समयदेखि एकसाथ काम गर्दै आएको हल्का रमाइलोका राजु मास्टर र बल्छी ध्रुबेबिच जग्गाको विषयमा झ ,ग, डा भएपछि ब बा ल, बल्छीले आफ्नो नाममा भएको जग्गा राजुलाई दिन्न भनेपछि यो जोडी अब के होला भन्ने अवस्थामा पुग्यो ? साथीभाई र आफन्तले पनि मि ला उन नसकेपछि सबै चि न्ति त भएका बेला बल्छि र राजु दुवै मिडियामा आए, के अब बन्दा होला हल्का रमाइलो ?
नेप्से सूचक र कारोबार रकममा गिरावट कायमै : साताको पहिलो कारोबार दिन देखिएको नेप्से सूचक र कारोबार रकमको गिरावटले साताको दोस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। अर्थात, यस दिन पनि नेप्से र कारोबार रकम दुबै घटेको छ।
सोमबार नेप्से परिसूचक ११.७८ अंक घटेर २८२२.७३ विन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.०४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.२१ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.५ अंक घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ५ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन साढे ४ अर्बको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
यस दिन २२४ कम्पनीको ५२ हजार ८४६ पटकको कारोबारमा ४ अर्ब ५८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।पछिल्लो समय असार मसान्तको प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको छ। मसान्त नजिकिएसँगै सबैतिर क्लोजिङ्गको प्रेसर बढेका कारण कारोबार रकमका साथै नेप्से सूचकमा पनि ह्रास आएको जानकारहरु बताउँछन्।
कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ५ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ८ उपसमूहको घटेको छ। यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.९ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, व्यापार उपसमूहको परिसूचक ३.६१ प्रतिशत बढेको छ। बाँकी उपसमूहका वृद्धिदर भने १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
सोमबार वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.६१ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै, विकास बैंकको २.३७ प्रतिशत, जलविद्युतको १.८९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटनको १.५८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको १.१२ प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन हिमालयन डिष्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन अपर तामाकोशीको १९ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।